PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - Baqophe umlando bephumelela odokotela
Baqophe umlando bephumelela odokotela
Kuthiwa bafike ngesikhathi umkhakha wezempilo ubadinga
Ilanga - 2018-07-09 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
ZIQOPHE umlando izitshudeni zaKwaZulu-Natal ebezifundela ubudokotela eCuba, ezitheleke kuleli ngeSonto ekuseni njengoba zibe yiqoqo lokuqala ukuba liningi ukubuya neziqu kuleliya lizwe selokhu kuqale lolu hlelo ngo1996.
Njengoba zibuyile lezi zitshudeni eziwu-260, sezisalelwe wukuqedela izinyanga eziwu-18 emanyuvesi aseNingizimu Afrika.
Zemukelwe nguNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo, kanti nemindeni yazo ibiphume ngobuningi bayo izokwamukela labo dokotela okulindelwe lukhulu kubona njengoba kulindeleke ukuba uma bethweswa iziqu ngemuva kwezinyanga ezingama-18, babuyele bayosebenza ngasemiphakathini abaphuma kuyona.
Ekhuluma neLANGA, uDkt Zazi Zulu (24) - naye obuya eCuba - uthe kumjabulisa kakhulu ukuthi ngemuva kokuzikhandla okungaka efunda kwelinye izwe, sekuze kwafika isikhathi sokubuyela ekhaya.
Uhambe ngo-2012 eneminyaka ewu-18 kanti uthi phakathi kwezingqinamba afike wabhekana nazo eCuba, wukuhluka kolimi kwazise khona kukhulunywa iSpanish.
Kudingeke ukuba unyaka wokuqala baqale bafunde sona.
“Kuleliya lizwe sihlale iminyaka ewu-6, kodwa omunye kawubalwa ngoba besifunda ulimi lwakhona. Ziningi izingqinamba esibhekane nazo, kodwa okungijabulisa kakhulu wukuthi manje sesibuyile sisekhaya,” kusho yena.
Uthe maduze nje uzolibangisa eWalter Sisulu University, eseEastern Cape lapho eyoqedela khona izifundo zakhe bese ebuyela eMgungundlovu lapho ezoqala asebenze khona ngaphambi kokuba ayosebenza kwezinye izindawo.
Ubonge kakhulu umnyango wezempilo nomphakathi waseNingizimu Afrika ngethuba.
UDkt Dhlomo uthe: "Kusijabulisa kakhulu ukuthi laba bafundi bakwazile ukumelana nezimo ezinzima kwelinye izwe iminyaka ewu-6 yonke.
"Sibonga kakhulu kulabo abasungule lolu hlelo okunguFidel Castro, owayengumengameli waseCuba noMnu Nelson Mandela owayengumengameli wakuleli, ngokunjalo noDkt Nkosazana Dlamini-Zuma."
Uthe labo dokotela yibona abazokhawula umkhokha wendlala emindenini nasemiphakathini abavela kuyona njengoba izingane zabo zingeke zisayazi inhlupheko.
Ubalule nokuthi bafike ngesikhathi lapho umkhakha wezempilo ubadinga kakhulu kwazise uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke, uDkt Aaron Motsoaledi usanda kwethula uhlelo lwezempilo iNational Health Insurance (NHI).
UDKT Zazi Zulu (ogqoke isikibha esimhlophe), othi uzimisele ngokusebenza emiphakathini yasemakhaya uma eqeda izifundo zakhe.